စျေးပေါသော CNC စက်သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Ouzhan
သံမဏိ CNC ကြိတ်ခွဲခြင်း - တိကျသောသံမဏိကြိတ်ခွဲအစိတ်အပိုင်းများ
သံမဏိများတွင် Ni၊ Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si နှင့် Cu စသည့်ဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သည်။ သံမဏိသည်ထူးခြားသောစွမ်းရည်၊ မြင့်မားသော wear ခံနိုင်မှု၊ မြင့်မားသောချေးခြင်းနှင့်သံချေးတက်ခြင်းစသည့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အစားအစာစက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ရုံများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အိမ်အလှဆင်ခြင်း၊ သံမဏိ၏အသုံးချမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီးကျယ်ပြန့်လာမည်ဖြစ်သော်လည်းသံမဏိ၏အသုံးချမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို၎င်း၏မျက်နှာပြင်သန့်စင်မှုနည်းပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတိုင်းအတာဖြင့်အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြတ်သည်။
- ဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများ - ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတုပြုန်းတီးမှုခံနိုင်ရည်သည်သံမဏိပစ္စည်းများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်ပြီးလျှင်ဒုတိယဖြစ်သည်။
- စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ - သံမဏိအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအရ၊ Martensitic သံမဏိကိုယ်ထည်သည်ခိုင်ခံ့မှုနှင့်မာကျောမှုရှိပြီးမြင့်မားသောခွန်အားနှင့်မြင့်မားသော wear ခံနိုင်ရည်လိုအပ်သည့်ချေးတုံးမှုဒဏ်ခံနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်ရိုးတံနှင့်သံမဏိများဖြစ်သည်။ စတိတ်ဓားများ၊ သံမဏိဝက်ဝံများစသည်တို့သည် austenitic သံမဏိကိုယ်ထည်သည်ကောင်းမွန်သောပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ခွန်အားမြင့်မားသည်။ သို့သော်သံမဏိများထဲတွင်အကောင်းဆုံးချေးသည်။ ၎င်းသည်ချေးယူမှုအလွန်ခံနိုင်သော်လည်းဓာတုဗေဒအပင်များနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာများကဲ့သို့သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနိမ့်ကျသည့်အခါများအတွက်သင့်တော်သည်။ sulfuric acid နှင့် hydrochloric acid ထုတ်လုပ်သူများ၏ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ရေငုပ်သင်္ဘောများကဲ့သို့သောစစ်တပ်လုပ်ငန်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ferritic သံမဏိသည်အသင့်အတင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးစွမ်းအားနိမ့်သော်လည်း၎င်းသည်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးစက်မှုမီးဖိုချောင်သုံးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
- လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်: Austenitic သံမဏိသည်အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောပလပ်စတစ်မှုကြောင့်၎င်းအားဖိအားပေးမှုအတွက်သင့်လျော်သောအမျိုးမျိုးသောသံမဏိပြားများ၊ ပြွန်များနှင့်အခြားပရိုဖိုင်းများထဲသို့ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ Martensitic သံမဏိသည်မာကျောမှုမြင့်မားသောကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျပါသည်။
OEM မှသံမဏိကြိတ်ခွဲခြင်းဝန်ဆောင်မှု - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း CNC သံမဏိကြိတ်ခွဲအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူ
Ouzhan သည်စက်ရုံနှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုပေါင်းစပ်ပေးသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်အလှည့်ကျစက်နှင့်ကြိတ်ခွဲစက်ပြုပြင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရ၎င်းသည်သံမဏိကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးတည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောမြင့်မားသော CNC ကြိတ်ခွဲစက်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုစျေးကွက်ရှိလူသိများသောတိကျမှန်ကန်သောအစိတ်အပိုင်းများမှရရှိသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာ။ ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာအဖွဲ့နှင့်ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်သည်သံမဏိကြိတ်စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေသည်။ ထို့အပြင် CNC ကြိတ်ခွဲထားသောသံမဏိထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပြီးအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ဖိုးရှိသောဖောက်သည်များအားသံမဏိ CNC ကြိတ်ခွဲသောထုတ်ကုန်များအတွက်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
1. Austenitic သံမဏိကြိတ်ခွဲထားသောအစိတ်အပိုင်းများသည်ပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးအစားအစာ၊ အထွေထွေဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အက်တမ်စွမ်းအင်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။
၂။ ferritic သံမဏိကြိတ်ခွဲထားသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ကျယ်ပြန့်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများ၊
၃။ Martensitic သံမဏိကြိတ်ခွဲထားသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆာလ်ဖာအက်ဆစ်၊ ဖော့စဖောရစ်အက်စစ်၊ Formic အက်ဆစ်နှင့်အက်စစ်အက်ဆစ်တို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
4. Chromium-nickel-molybdenum သံမဏိကြိတ်ခွဲစက်များ၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ စက္ကူ၊ ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှအပူလဲလှယ်ခြင်းနှင့် condensers ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
- CNC ကြိတ်ခွဲထားသောသံမဏိထုတ်ကုန်အားလုံးသည်တိကျသောအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများကိုခံကြရသည်။
- Ouzhan တွင်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်များ၊ ပေါင်းစည်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ စံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများထက်မကပါ။ ပစ္စည်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာများပါရှိသည်။